Wararka - Taageerayaasha Hindida BTS waxay si dhakhso leh u ururiyaan lacag caddaan ah si ay ula dagaallamaan kororka waddanka
dhibaatada fayruuska Corona
Xilliga dhibaatada sii kordheysa ee coronavirus-ka Hindiya, taageerayaasha BTS waxay qaadeen tallaabo ay ku uruurinayaan lacag si ay u caawiyaan kuwa u baahan.
Toddobaadkii la soo dhaafay, dadaallada gargaarka ee loo yaqaan 'Covid-19' oo ay abaabuleen koox ka socota naadiga taageerayaasha BTS ee loo yaqaan Ciidanka, ayaa waxay ka soo ururiyeen in ka badan laba milyan oo rupees (US $ 29,000).
Isku dubaridaha goobta ay ku badan yihiin dadka Hindida ah ee Milaap, koontada warbaahinta bulshada ee loo yaqaan "Covid Relief India by BTS Army" waxay kor u qaadday in ka badan laba milyan oo rupees 24 saacadood, iyadoo taageerayaasha 2,465 ay ku tabaruceen.
Ma haysaa su'aalo ku saabsan mawduucyada iyo isbeddellada ugu waaweyn ee adduunka ka socda? Jawaabaha ku hel Aqoonta 'SCMP Aqoonta', barxadeena cusub ee nuxurkeedu kooban yahay oo leh sharraxayaal, Su'aalo, falanqayn iyo xog-ururin ay kuu keeneen kooxdayada ku guuleysatay abaalmarinta.
Lacag aruurinta ayaa timid intii lagu gudajiray mowjadii labaad ee cudurka coronavirus ee dalka, iyo kiisas aan horey loo arag iyo dhimasho iyadoo Hindiya ay wajaheyso dhibaato caafimaad oo ay sababtay qeyb ahaan agab caafimaad la'aan - oo ay kujirto oxygen la'aan - iyo nooc cusub oo virus ah.
Dadaallada samafalka ee Ciidanka waxay diiradda saareen ugu horreyn bixinta oksijiinta iyo agabyada kale ee caafimaad, iyo sidoo kale cuntada kuwa u baahan. Ololuhu wuxuu mudnaanta siiyay Maharashtra iyo Delhi, halkaasoo xaaladda la xiriirta masiibada ay khatar tahay.
Sida laga soo xigtay raadiyaha loo yaqaan 'Covid-19 tracker' ee ka socda jaamacadda Johns Hopkins, subaxnimadii Isniinta, Hindiya waxaa soo maray wadar ahaan ku dhowaad 17 milyan oo kiis, iyada oo in ka badan 192,000 ay u dhinteen. Toddobaadkii la soo dhaafay, Hindiya waxay soo warisay in ka badan 300,000 tijaabooyin wanaagsan maalintii; waxaa jira walaacyo badan oo ku saabsan infekshinnada si aad ah looga warbixinayo.
Bukaannada coronavirus-ka Hindiya ayaa neefta ku neefsada iyada oo ay jirto oksijiin yaraanta Dhowr waddan ayaa shaaca ka qaaday inay gargaar keenayaan, laakiin shatiyada ayaa India iyo dalal kale ka horjoogsanaya inay soo saaraan tallaal ku filan oo dadkiisa lagu daaweeyo.
Maqaallo Dheeraad ah oo ka socda SCMP
Isbedelada nidaamka doorashada Hong Kong ayaa wali ah iib adag Kamboodiya, xirnaanshaha 'Phnom Penh coronavirus' oo dheereeya wuxuu ka tagayaa shaqaalaha dharka, kuwa wax ka iibiya suuqa inay gaajoodaan 8 Xiddigaha Kuuriya 'waa la joojiyay' fadeexado kadib: Seo Ye-ji waxaa laga soo dajiyay Jasiiradda K-drama, halka Ji Soo uu ka tagay Wabiga Markuu Dayaxu soo baxo - waxaana laga yaabaa in lagu dacweeyo US $ 2.7 milyan Muranka xadka Shiinaha iyo Hindiya: miyuu New Delhi ka baxay Pangong Tso lake qalad?
Iyada oo lagu guda jiro xiisadda Mareykanka iyo Shiinaha, Aasiya waa in ay isu timaaddaa si ay aayaheeda dib ugu celiso
Maqaalkani wuxuu markiisii ​​hore ka soo muuqday South China Morning Post (www.scmp.com), oo ah warbaahin hoggaamineysa warbaahinta wararka ee Shiinaha iyo Aasiya.
Alaabada Kulul - Khariidadda bogga - AMP Mobile 3 Lakab Maaskaro La Tuuri Karo Iyadoo Fda, 3ply Maaskaro Maaskaro Waji ah, 3ply Maqaalka Wajiga Qalliinka, 3 Maaskarada Wajiga ee Fly Non-xidhkii, Heerka 3 Maaskarada Qalliinka, Maaskaro Ffp3,